19 Istaatistikada Iibka ee E-maylka, Taleefanka, Farriinta codka, iyo iibinta bulshada | Martech Zone
19 Istaatiijiyada Iibka ee Emailka, Taleefanka, Cod-bixinta, iyo Iibinta Bulshada
Khamiista, Noofembar 10, 2016 Arbacada, Agoosto 30, 2017 Andrew Gazdecki
Iibintu waa ganacsi dad halkaas oo cilaaqaadyadu ay muhiim u yihiin sheyga, gaar ahaan warshadaha iibinta softiweerka. Milkiilayaasha meheraddu waxay u baahan yihiin qof ay ku kalsoonaan karaan tikniyoolajiyadooda. Waxay ka faa'iideysan doonaan xaqiiqadan, waxayna u dagaallami doonaan qiimaha wanaagsan, laakiin way ka qoto dheer tahay intaas. Wakiilka iibka iyo milkiilaha SMB waa inay is fahmaan, waana muhiim ka sii iibsiga iibka si taasi u dhacdo. Maaha wax aan caadi ahayn in go'aan qaadayaashu ay ka boodaan iibka iibka ee aysan jeclayn, xitaa haddii ay macnaheedu tahay bixinta wax badan.
Waxaa jira kaftan hore oo xagga maareynta ah oo ah in iibiyaha iibku uusan noqon mid caqli badan - kaliya caqli ku filan. Dhammaan qof kasta oo iibka u baahan inuu ogaado waa sida loo xiro heshiiska. Haddii ay taas sameyn karaan, inta soo hartay ayaa is daryeeli doonta. Caawiyeyaasha xafiiska iyo xisaabiyeyaashu way daryeeli karaan inta hartay. Waxa ugu muhiimsan ee dacwadaha dabaqa sare ku saabsan waa lacag intee le'eg baa iibiyaha iibiyaha ahi keeni karaa.
Ka shaqeynta iibka sidoo kale waxay u baahan tahay maskax ka duwan. Nijaar wuxuu ogyahay goorta wax la dhiso oo la dhammeeyo. Shaqadoodu waa hortooda oo la taaban karo. Qofka ka shaqeeya qadka isku xidhka ayaa arki doona waxa ay ku kordhiyeen wijetigii ay ka caawiyeen dhismaha, sidoo kale waxay ogaan doonaan inta qaybood ee ay dhammeeyeen maalintii. Dib-u-iibiyaha ma haysto safka la taaban karo. Guulahooda waxaa loo cabiraa sida dhibcaha ciyaarta. Way ogyihiin inay heleen, xitaa haddii aysan ahayn wax ay taaban karaan oo ay dareemi karaan. Kaarkooda dhibcaha ayaa ka kooban qaddar doollar iyo kootooyin.
Sidoo kale maahan goob durugsan. Teknolojiyada ayaa bedeshay iibinta sida ugu badan ee warshadaha kale. Warbaahinta bulshada ayaa siisay habab badan oo ay ku gaaraan macaamiisha waxyaabaha ay ka midka yihiin iimeylku waxay noqon karaan aalado wax ku ool u ah kuwa garanaya sida loo isticmaalo. Faahfaahintan ka socota Barnaamijyada Caajiska waxay muujineysaa saameynta fog ee tikniyoolajiyadu ku leedahay iibka, iyo sida ciyaarta loo beddelay.
19 Tirakoobyada Naxdinta Leh Ee Wax Ka Badali Doona Sida Aad U Iibiso
Ku saabsan Qalalaasaha Bizness
Barnaamijyada Caajiska waa WordPress loogu talagalay abuurka barnaamijka moobiilka. Qaar badan oo ka mid ah macaamiisheennu waa curiye calaamadeeye calaamadeeye - suuq geynta ama wakaaladaha naqshadeynta ee adeegsada barnaamijkeena si ay si hufan ugu dhisaan barnaamijyo moobiil macaamiisha ganacsiga yaryar.
Tags: barnaamijyada biznessKordhinta Iibkatirakoobka iibkatirakoobka iibkaiibinta codkaiibinta tirakoobka codkaiibinta bulshadastats iibka telefoonka